भाग्यमानी मानीसकाे हातमा मात्र हुन्छ यस्ताे रेखा - ज्ञानविज्ञान
जुन मानिसलाई हस्तरेखा शास्त्रबारे थोरै पनि ज्ञान हुन्छ, उनीहरु यो जान्छन् कि हातको रेखाले भविश्यको सटिक अनुमान लगाउन सकिँदैन । किनकी हातका रेखाहरु व्यक्तिले गर्ने राम्रा नराम्रा कामले हरेक पल बदलिरहन्छन् ।
यो रेखा सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानिन्छ । आयु, उपलब्धिहरू, संकट र दुर्घटना जस्ता कुरा यो हेरेर थाहा पाइन्छ । यो रेखा औंला र चोर औंलाको बीचबाट शुरु भएर हातको तल्लो भाग अर्थात् मणिबन्धसम्म आइपुग्छ ।
गाढा र सिधा रेखाले राम्रो जीवनको संकेत दिन्छ भने काटिएको, अपूरो र गोलचक्कर भएको रेखाले अशुभ संकेत गर्छ ।
जीवनरेखासँगै जोडिएको मस्तिष्क रेखा हुन्छ । यो कसैकोमा सिधा अनि कसैकोमा तलतिर गएको हुन्छ । कहिलेकहिले त यो रेखा जीवनरेखासँग नजोडिएर अलिकति माथिबाट पनि गएको हुन्छ ।
यो रेखाको अध्ययनले मानसिक क्षमता, बुद्धि, योग्यता, वैचारिक प्रखरता आदिको बारेमा थाहा लाग्छ ।
कान्छी औंलाको मुनिबाट शुरु भएर चोर औंलातर्फ जाने रेखा हृदयरेखा हो । यस रेखाले हृदयको शक्ति, संवेदनशीलता, स्वभाव, गुण, अवगुण आदिका बारेमा इशारा गर्छ ।
तलतिर झुकेको रेखा भएको व्यक्ति अन्तर्मुखी, साहित्य र संगीतमा मन गर्ने कलाकार प्रकृतिको हुन्छ । माथितिर गएको रेखा भएको मानिस प्राविधिक शिक्षाको जानकार र दिमाग लगाउने काम गर्ने खालको हुन् ।
मणिबन्ध अथवा हातको मुनिपट्टिबाट शुरु भएको रेखा माझी औंलाको नजिकै पुग्छ, यसैलाई भाग्य रेखा भनिन्छ । स्पष्ट भाग्य रेखा भएका मानिस भाग्यशाली हुन्छन् ।
हातको मुनिबाट निस्कने रेखाले परिवारको सहयोगबाट भाग्योदय हुने संकेत गर्छ भने चन्द्र पर्वतबाट निस्कने रेखाले आफ्नै पौरखले भाग्योदय हुने इशारा दिन्छ ।
हातमा रहेका यी ७ रेखाबाट थाहा हुन्छ तपाईको जीवन कस्तो हुनेछ ?
जीवन रेखा तपाईको हातमा हुने महत्वपूर्ण रेखा हो । जसमा तपाईको जीवन र जीवनमा हुने महत्वपूर्ण घटनाको रहस्य लुकेको हुन्छ । यदी यो रेखा गहिरो र लामो छ भने तपाईको स्वास्थ्य राम्रो हुने छ । यस्तै रेखा पातलो र छोटो छ भने जीवनमा अनेक कष्ट , दुःख सहनुपर्ने हुन्छ ।
२ हृदय रेखा
हृदय रेखामा तपाईको प्रेम तथा नाता–सम्बन्धसँग जोडिएका कैयौं रहस्य लुकेका हुन्छन् । यदि तपाई कुनै व्यक्तिको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ कि, त्यो व्यक्ति भावुक छ या छैन भनेर ? तपाई उसको हातमा भएको हृदय रेखा हेरर अन्दाज लगाउन सक्नुहुन्छ ।
हातको पञ्जामा रहेको हृदय रेखा सिधा र छोटो छ भने त्यस्तो व्यक्ति शब्दले वर्णन गरे भन्दा काम गरेर प्रेम दर्साउँछन् । यदि कुनै व्यक्तिको हातको यो रेखा मोडिएको छ भने त्यो व्यक्तिको इच्छा धेरै प्रबल हुन्छ ।
३ मस्तिष्क रेखा
मस्तिष्क रेखा कुनै व्यक्तिको ज्ञान तथा विवेकको जानकारी दिन्छ । साथै यसबाट तपाईको मनोविज्ञानबारे पनि जानकारी लिन सकिन्छ । यो रेखा छोटो हुनुको अर्थ हो कि, तपाई जिन्दगीका जुनसुकै फैसला पनि एकदम सजिलै लिन सक्नुहुन्छ ।
यस्तै यो रेखा लामो हुनुको अर्थ हो कि तपाई कुनै पनि कुराबारे गहिराइमा गएर बुझेर मात्रै निर्णय गर्नुहुन्छ । लामो र मोडिएको मस्तिष्क रेखा हुनुको अर्थ हो कि, तपाई रचनात्मक तरिकाले सोच्नुहुन्छ ।
४ भाग्य रेखा
यो रेखा बीच बीचमा टुटेको हुनु अथवा पातलको हुनुको अर्थ हो कि तपाईको भाग्य बुलन्द छैन । तपाईले जीवनमा धेरै समस्याको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ । यदि यो रेखा तपाईको औंलाबाट सुरु भएर जीवन रेखा छुन्छ भने तपाईलाई परिवार र साथीहरुबाट सधैं सुख प्राप्त हुने छ ।
५ सूर्य रेखा
यो रेखाको बारेमा धेरै व्यक्तिलाई जानकारी नै हुँदैन । यो रेखा तपाईको हातको पञ्जामा ठाडो रुपमा कोरिएको हुन्छ । जसबाट थाहा हुन्छ कि, कुनै व्यक्ति कति रचनात्मक हुन्छ । साथै कुनै व्यक्तिमा कति आत्मविश्वास र योग्यता छ भन्ने अनुमान पनि यो रेखाबाट गरिन्छ । धेरैजसो मानिसहरुमा यो रेखाको अभाव हुन्छ ।
६ छोटा र पातला रेखा
हामीमध्ये धेरै व्यक्तिका हातमा छोटा र पातला धेरै रेखा हुन्छन् । यस्ता व्यक्ति धेरै संवेदनशील मानिन्छन् । साथै समय आउँदा यस्ता व्यक्ति सही र गलतको बीचमा फरक छुट्याउन दुविधामा पर्ने गर्छन् ।
७ हातमा धेरै कम रेखा हुनु
यस्ता व्यक्ति आफ्नो बचनको पक्का हुनुका साथै जिद्दी स्वभावका हुन्छन् । हातमा कम रेखा हुने व्यक्ति कहिल्यै कसैका लागि बदलिँदैनन् । यस्ता व्यक्तिसँग सम्बन्ध गाँस्नु र सम्बन्ध टिकाइ राख्नु तथा कुरा गर्न पनि गाह्रो हुने गर्छ ।
Don't Miss it एलर्जीबाट जाेगीन कस्ता खानेकुरा खानु हुदैन ? जान्नुहाेस्
Up Next सबै भन्दा उत्तम पुरूषमा हुन्छन् यस्ता गुण